साँच्चै यो वर्ष अघिल्ला वर्षहरु भन्दा बढी जाडो भएको उपत्यका वासीले महसुस गरे ।
२ माघ, काठमाडौं । काठमाडौ उपत्यकामा गत सोमबार अहिले सम्मकै बढी जाडो महसुस गरिएको थियो । उक्त दिन काठमाडौँ उपयकाको तापक्रम ० डिग्री सेल्सियस थियो । र,यो यस वर्षको अहिले सम्मकै कम तापक्रम हो । त्यसैले मानिसहरुलाई दैनिकी कामहरु गर्न निकै नै कठिन भइरहेको हो ।
यही जाडोको कारणले गर्दा मानिसहरु चोक ,गल्लि गल्लीमा आगो ताप्दै आफ्नो दैनिकी का्ट्ने गरेका छन भने बूढा बूढी र बच्चाहरु लाई धेरै रोगको समस्या देखिएको छ । त्यसैले मानिसहरु धेरै चिन्तित पनि छ्न । उनीहरु छिटै जाडो कम हुँदै जाओस भन्ने कामना पनि गर्छन।
साँच्चै यो वर्ष अघिल्ला वर्षहरु भन्दा बढी जाडो भएको उपत्यका वासीले महसुस गरे । त्यसैले उपत्यकाका टोल ,चोक र गल्ली गल्लीहरुमा मकल कराही र अन्य भाँडाकुँडामा कागज ,कोइला , दाउरा बालेर आगो तापिरहेका देखिन्थे ।
काठमाण्डौको फोहोर टिप्दै बेलायती सुन्दरी ! भनिन् , नेपालमा सरकार छैन ?
देशका अधिकांश स्थानमा आज वर्षाको सम्भावना
काठमाडौं उपत्यका लगायतका जिल्लाहरुमा सतर्कता अप्नाउन अपिल
झरीले जनजीवन प्रभावित, तरार्इमा ‘हार्इ अलर्ट’, कुन कुन जिल्ला छन् खतरामा ?
विश्व वातावरण दिवस: : "सके बहिष्कार, नसके पुनर्प्रयोग"